Accueil > Newsletters > Fampitam-baovao laharana 95
« Newsletter n° 95
Newsletter n° 95 [ENG] »
publié par Admin 2, le lundi 7 mai 2018
TOKONY HO FOANANA NY FAHALANIAN’NY LALANA
MOMBA NY Z.E.S. (Faritra Ekonomika Manokana)
Manoloana ny fahamaroan’ny hetsika sy ny fahavitrian’ny mpanandratra ny Faritra Ekonomika Manokana (Z.E.S.) sy ny tetikasa hafa manome tombotsoa manokana ny vahiny, mandritry ny mpanao politika mifanolana momba ny lalàm-pifidianana, dia manome lanja ny fanamafisana ny adi-hevitra mikasika ny lalàna momba ny ZES ny Fikambanana TANY sy ny CRAAD-OI.
Ny fandaharana ny fivoriana ara-potoanan’ny Antenimieram-pirenena dia mampiseho fikasàna handany ny volavolan-dalàna laharana 033-2016 taminy 17 Aogositra 2016 manome alàlana ny fankatoavana ny fifanarahana hametrahana ny Vaomiera Iombonana eo amin’ny Repoblika Malagasy sy Maorisiana (1) amin’ny herinandro ho avy. Mampahatsiaro mafy ilay fifanekena lasitry ny fiaraha-miasa momba ny ZES ao Toliara izay voasonia tao Port-Louis taminy faha-11 Marsa 2016 (2) io anaran’ny volavolan-dalàna io. Za-dratsy loatra ny fomba fiasa mifanohitra amin’ny demokrasia sy ny teny ifampieràna ny mpitondra sy mpandray fanapaha-kevitra malagasy ka tsy miraharaha ny fangaraharàna ary mandany lalàna izay tsy nampahafantarina ny olompirenena ny votoatiny. Koa mamerina ny fangatahana izahay ny hisian’ny fifanakalozana sy adi-hevitra mikasika ny volavolan-dalàna rehetra mahakasika ny tany malagasy alohan’ny itondràna sy hampisehoana azy any amin’ny Antenimieram-pirenena.
Ankoatr’izay, ny lalàna momba ny ZES dia lany ny faha-3 Aprily 2018 tamin’ny fomba tsy azo ekena toy ireo lalàm-pifidianana izay fototry ny kirizy ara-politika miseho ankehitriny. Ny daholobe tsy nampahalalàna raha nisy fanovàna na tsia ny votoatin’io lalàna io taorian’ny nanambaràn’ny Fitsaràna Avo momba ny Lalàmpanorenana (HCC) fa mifanipaka amin’ny Lalàm-panorenana ny andininy maro ao amin’ny lalàna laharana 2017-023 (3). Koa tokony foanana tsy hanan-kery koa io fandaniana io.
Nanambara ny Filohan’ny Repoblika vao aingana fa tsy fivarotana ny tany malagasy ny ZES fa
« fampanofana mandritry ny 30 taona azo havaozina » fotsiny. Misy fanandratana hevitra (publi- reportage) nalefa tamin’ny fahitalavitra mihoatry ny iray mamerimberina io fandresen-dahatra io izay manafitohina olompirenena maro.
Tianay tokoa mantsy ny mampahatsiahy indray fa ny fampanofana tany mandritry ny fe-potoana maharitra antsoina hoe “bail emphytéotique” ao Madagasikara dia mampananontanona ny fahaverezana tanteraka ny tany malagasy satria manome alàlana ny orinasa mpanofa hanao antoka ny ampahany amin’ny velarantany any amin’ny banky. Ny tranga malaza indrindra mikasika izany dia ny nanaovan’ny orinasa tao Ambatovy antoka tany midadasika amin’ny hekitara maro any amin’ny banky any ivelany.
Ankoatr’izany dia averinay eto koa fa ho an’ny fianankavian’ny tantsaha izay mivelona sy mamboly eo amin’ny tany voakasik’izany, dia mitovy tsy misy valaka amin’ny vokatry ny fivarotana tany ny fiantraikan’ny fampanofana tany satria ho very fananana sy voaraoka, amin’ny fomba tsy misy fitsimbinana mihitsy izy ireo, noho ny antony voalaza fa ho an’ny tombotsoan’ny daholobe, nefa ny homena ny tany sy hahazo tombotsoa amin’ny ZES dia mpampiasa vola tsy miankina.
Ny famaritàna fa azo havaozina io fampanofàna io dia mahatonga ny faharetany tsy ho voafetra, indrindra moa fa ny politikan’ny mpitondra nandritry ny taona maro nifanesy izao dia ny hanome lalandava ny laharam-pahamehana ho an’ny fampiasàna sy fanomezana tany ny mpampiasa vola, indrindra fa vahiny, izay miteraka fambotriana ny tombotsoan’ny mponina maro an’isa.
Ao amina « video » azon’ny rehetra takarina (4) dia misy mpiandraikitra iray miresaka momba ny tombony ho entin’ireo Faritra Ekonomika Manokana (ZES) ireo ho an’ny firenena. Rehefa avy nisalasala kely izy dia nitanisa ny zara-tombony (« dividendes »), izay tsy nofaritiny hoe avy aiza ny fotony, sy ny hetra izay haloan’ny mpiasan’ny orinasa ao amin’ny ZES. Mazava ho azy fa tsy voatery hanolotra tany aman-jaton’na hekitara ireo orinasa, izay vahiny ny ankamaroany, vao afaka hampiditra vola toy ireo ho an’ny Fanjakàna.
Ny fitanisan’io olona avo toerana io ny orinasa QMM ho ohatra, dia nampiverina tao an-tsain’ny mpihaino maro ny fampitomboan’ny QMM ny renivolany tamin’ny volana desambra 2015. Taorian’izany mantsy no nahafantarana fa nanomboka teo ny zara-tombony (dividendes) izay tokony ho entin’ny orinasa QMM ho an’ny fanjakàna Malagasy dia harotsaka mivantana any amin’ny orinasa Rio Tinto mandritry ny taona maro ho avy (5). Io fakàna ny orinasa QMM ho ohatra io sy ny famakiana andininy vitsivitsy ao amin’ny lalàna laharana 2017-023 dia mampitombo mafy ny ahiahy. Mananontanona mantsy fa ny vola ilaina amin’ny famoronana sy fametrahana ny Faritra Ekonomika Manokana (ZES), izay ahatratra 2 lavitrisa dôlara ho an’ny ZES ao Antsiranana araky ny vinavina nambaran’ny tompon’andraikita (6) dia ho hita amin’ny alalan’ny findraman’ny firenena malagasy vola ka hiteraka trosa havesatra sy hihoampampana ho an’ny taranaka fara-mandimby malagasy. Na ahoana na ahoana, ny ohatra noraisin’ilay mpiandraikitra dia manamarina fa ho kely dia kely ny vola tombony ho azon’ny Fanjakàna amin’ny fametrahana ZES nefa maro ny loza mitatao sy hitranga ho entiny ho an’ny mponina.
Ao anatin’io « video » io ihany, dia misy mpanandratra ny ZES hafa makadiry manambara fa ny fametrahana ny Faritra Ekonomika Manokana (ZES), dia mifanandrify amina « safidy mikasika ny fiaraha- monina ». Tsindrianay mafy eto fa izany vinam-piaraha-monina izany dia mifanipaka amin’ny tombotsoan’ny Malagasy maro an’isa satria hiteraka fahaverezan’ny velarantany midadasika ho an’ny fianankaviana sy taranaka fara-mandimby maro an’isa. Ireo velarantany ireo anefa tena ho ilain’izy ireo amin’ny fandrosoany sy fivelarany amin’ny fomba maharitra.
- Ny tsy fisian’ny adi-hevitra sy fakan-kevitra tamin’ny olom-pirenena teo amin’ny ambaratonga
nasionaly momba io volavolan-dalàna mikasika ny ZES io,
-	ny finiavana hanome ny AZES – Fahefàna mandrindra ny Faritra Ara-toekarena Manokana –
ny fahefana fototry ny Fitondra-panjakàna ao anatin’ny lalàna,
-	ny fiziriziriana sy fampiasana fomba tsy mendrika sy amboletra nataon’ny mpitondra mba hampandaniana io lalàna io taminy 3 Aprily 2018 teo anivon’ny Antenimieram-pirenena taorian’ny nandavan’ny solombavam-bahoaka azy tamin’ny herinandro teo aloha,
-	ny fanamafisan’ny tompon’andraikitra sasany fa « tsy azo idovirana ny fampiasàna ZES ho an’ny
firenena » (7)
-	ny fampielezana hafatra fandresen-dahatra maro sy matetika noho ny mahazatra alohan’ny hivoahan’ny fanekena ilay lalàna ho azo ampiharina (promulgation)
dia miteraka fanontaniana maro momba ny mety ho efa fisian’ny fanomezana toky olona sy
vondron’olona any ivelany nataon’ny manam-pahefana eo amin’ny ambaratonga nasionaly.
-	Ny fahalalàna azo tany amin’ny gazety fa niantso manam-pahaizana iray avy any ivelany ny mpitondra teo amin’ny famolavolàna sy fanoratana ny lalàna malagasy momba ny ZES (8) ary ny fahitàna sarisary momba ny hoe « ZES malagasy » ao amin’ny aterineto (9), « tanàna vaovao » tsy
misy ifandraisany mihitsy amin’ny dingana misy ny fiainan’ny ankamaroan’ny Malagasy dia mampanontani-tena hoe sao dia endrika vaovao -n’ny fanjanahan-tany ary ireto Faritra Ekonomika Manokana (ZES) ireto, izany hoe fametrahana amin’ny fomba « ara-dalàna » fifehezan’ny hery vahiny ara-politika sy ara-toe-karena ny faritry ny tanindrazana.
Ny Fikambanana TANY sy ny CRAAD-OI dia mangataka ny hanafoanana ilay fahalanian’ny lalàna momba ny Faritra Ekonomika Manokana (Z.E.S.) ary manohana ny fitakian’ny olompirenena izay mangataka ny hisian’ny fananan-tany manome antoka ny fanaovana ho laharam-pamehana ny zon’ny tompontany malagasy eo amin’ny fananan-tany sy fampiasàna ny tany.
5 mey 2018
Randriamaro Zo, Mpandrindra - craad.madagascar@gmail.com ; http://craadoi-mada.com
Amin’ny anaran’ny Fikambanana TANY miaro ny tany malagasy - Collectif pour la Défense des Terres Malgaches –
Rakotondrainibe Mamy, filohan’ny fikambanana - patrimoine.malgache@yahoo.fr ; www.terresmalgaches.info ; www.facebook.com/TANYterresm....
Mercredi 16 mai 2018 , 10h00 - Salle des Séances
(2)	http://sobikamada.com/economie/item... coop%C3%A9ration.html
Azo atao anefa ny maneho fisalasalana mikasika ny toerana (tokana na maro) nofidian’ny Maorisianina satria toa liana amin’ny ZES any Antsiranana koa ry zareo.
(3)	http://www.hcc.gov.mg/decisions/d3/... aux-zones-economiques-speciales/
(5)	http://www.midi-madagasikara.mg/eco... malgache/
(6)	http://www.ladepeche-madagascar.com... hub-economique-dandrakaka/
(8)	https://www.africaintelligence.fr/l... zes,108306886-art
Tsara ho vakiana koa :
NY LALÀNA MAHAKASIKA NY FARITRA ARA-TOEKARENA MANOKANA (ZES), VARAVARANA MISOKATRA HO AN’NY
FANGORONAN-TANY ETO MADAGASIKARA : http://www.terresmalgaches.info/spi...
-	ADRESSE AUX SÉNATEURS - FIXER DES BALISES COHÉRENTES DANS LE PROJET DE LOI N°018/2017 RELATIVE AUX
ZONES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES POUR GARANTIR L’INTÉRÊT DE LA NATION ET DES COMMUNAUTÉS IMPACTÉES :